Amụma nzuzo - Nde ndị na-eme nde
Biko chọta n'okpuru amụma nzuzo MillionMakers.com kachasị ọhụrụ ("amụma nzuzo").
Ebumnuche nke Iwu Nzuzo anyị bụ ịkọwa n'ụzọ doro anya n'ụzọ dị mfe yana n'ụzọ dị nkenke, n'ụzọ doro anya na nghọta, otu anyị si ejikwa data nke gị. Enwere ike inweta data nkeonwe n'ime usoro nke nnyefe ọrụ, usoro nhọrọ, nnata nke ọrụ ị nyere ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị jikwaa data a mgbe ị gara na weebụsaịtị anyị. Anyị iwu na-ekwe nkwa ichebe ikike gị, nzuzo na nche nke ozi ị nyere anyị, dị ka ọrụ iwu na usoro maka nchedo nke onwe onye data na karịsịa, na nnabata nke ọrụ nke nghọta. N'ọnọdụ pụrụ iche, anyị nwere ike iji data nkeonwe maka mmega ma ọ bụ agbachitere ikike dị na usoro ikpe.
Anyị nwere ike ịkekọrịta data nke gị
Companieslọ ọrụ anyị.
Nchịkwa Ọha na Ọha mgbe ụtụ, ọrụ, nchekwa ọha ma ọ bụ iwu ọ bụla ọzọ achọrọ.
Ndi nwere ike i goro ọrụ, ndi oru n ’ulo oru, ndi ozo, ndi n’acho oru aka ya na ndi nchikota ohere oru iji mee ka eleghi anya gi nweta oru ndi okacha amara.
Companieslọ ọrụ na-ahụ maka nhazi data, dị ka ndị na-eweta ọrụ na-enye anyị ọrụ dị ka ndị na-ahụ maka mpụga na ndị ndụmọdụ ọkachamara, ndị ọka iwu, ndị na-enyocha ego, ndị na-echekwa ego, ụlọ akụ / ụlọ ọrụ ego, ndị ọkachamara kọmputa, ndị ọrụ mbata na ọpụpụ, ndị na-enyocha akwụkwọ, ntozu na nkwenye mpụ mgbe ha bilitere na. dabaa n'iwu.
Nyefe data mba ofesi nwekwara ike ime ihe omume ndị gara aga anyị ga-eso APPs, nkwekọrịta nkwekọrịta ọkọlọtọ nke European Commission na EU-USA Shield na-ekwe nkwa na-ebufe ndị ahụ ebufere na mba ndị na-enweghị ezigbo mkpebi. site na European Commission. N'ọnọdụ ọ bụla, ndị ọzọ a na-ekerịta ụfọdụ ihe gbasara omume onwe ha, ekwenyelarị na usoro nke usoro ọrụ na nhazi zuru oke maka nchedo ya ziri ezi.
Ngosipụta nke anyị ka anyị n’egosi nzuzo ma ọ bụ na odika iwu. Anyị na-ewere nzọụkwụ ezi uche dị na ọnọdụ iji hụ na ndị ọzọ anyị nyere ozi gbasara onye nke anyị na-ejikwa ozi nkeonwe gị dabere na GDPR yana Iwu Nzuzo.
Nchedo Nkeonwe Banyere Gị
Anyị na-agbaso usoro nke teknụzụ na nhazi dị mkpa iji jigide larịị nke nchekwa na nzuzo banyere mkpa data haziri ma n'otu aka ahụ, etinyela usoro dị mkpa iji zere ike anyị, ojiji na-ekwesịghị ekwesị, nnweta na-enweghị ikike, mgbanwe ndị na-ezighi ezi, mwepụ na ọnwụ
Iwu nzuzo a metụtara www.millionmakers.com,, nke MM LLC nwe ya ma na-aru ya. Iwu nzuzo a na-akọwa otu anyị si anakọta ma jiri ozi nkeonwe ị nyere na weebụsaịtị anyị. Ọ na-akọwakwa nhọrọ ndị dịnụ maka gị iji ozi nkeonwe gị, yana otu ị ga - esi nweta ma melite ozi a.
1. Nchịkọta ozi na ojiji
Anyị na-anakọta gị ozi nkeonwe ndị a.
Ozi ịkpọtụrụ, dị ka aha gị, adresị email, adres gị na akara ekwentị gị.
Ozi ịgba ụgwọ, adreesị obibi na adreesị ịgba ụgwọ.
Ozi gbasara azụmahịa gị, dị ka aha ụlọ ọrụ, adreesị, ụdị azụmahịa yana onye nwe ya / ndị na-erite uru.
Ozi banyere n’ime saịtị Job, ahaziri iche, ịkparịta ụka n'socialntanet, ezigbo ụlọ, na ọrụ ndị ọzọ bụ ihe ịchọrọ, anyị anaghị eji ya ụgwọ maka ya.
Anyị nwere ike ịnakọta ozi gbasara ndị ọzọ mgbe ị gbakwunye aha ndị zụrụ ahịa, onye na-ere ahia, ndị na-enye ọrụ, ndị ahịa ma ọ bụ ndị na-erite uru na mpempe akwụkwọ anyị. Nchịkọta ozi onye ọzọ nwere ike ịdị mkpa ịhazi ma debanye aha gị maka ụfọdụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ụfọdụ. Anyị agaghị eji ozi a maka nzube azụmahịa ọ bụla. Ndị ọzọ a nwere ike ịkpọtụrụ anyị na info@millionmakers.com ịrịọ ka anyị wepu ozi a na nchekwa data anyị.
Anyị na-eji ozi anyị nakọtara:
Mezue iwu gị.
Zitere gị ozi nkwenye.
Nyochaa mkpa azụmahịa gị iji chọpụta ngwaahịa dị mma.
Zitere gị ngwaahịa ma ọ bụ ozi achọrọ.
Zaa ajuju ndi ahia anyi.
Zitere gị nkwukọrịta.
Na-eduzi ịdị uchu.
Zaghachi nchegbu gị na ajụjụ gị.
2. Nkesa ozi
Anyị ga-eso ndị ọzọ wee kesaa ozi gbasara gị naanị n'ụzọ a kọwara na iwu nzuzo a. Anyị anaghị erere ozi onye ahịa anyị gbasara ndị ọzọ.
Anyị nwere ike ịnye ụlọ ọrụ ndị na-enye ọrụ ozi gị iji nyere anyị aka maka azụmahịa anyị (dịka ọmụmaatụ; ịhazi usoro gị / ịkwụ ụgwọ, ọrụ mbata na ọpụpụ, ọrụ visa, ikike ọrụ, nyocha akwụkwọ, ịzụ / ire ahịa dị adị, ịdenye aha azụmahịa gị, inye ikikere, imeghe akaụntụ akụ, imepụta ego maka ego ma ọ bụ maka inye ndị ahịa ọrụ). E nyere ụlọ ọrụ ndị a iji ozi nkeonwe gị naanị maka mkpa iji nye ọrụ ndị a.
Offọdụ n'ime ibe anyị na-eji "usoro nhazi" iji mee ka ọdịnaya gaa na site n'aka ndị na-enye ọrụ anyị (dịka onye na-akwụ ụgwọ ụgwọ) ma na-echekwa ọdịdị na mmetụta nke saịtị a. Biko mara na ị na-enye ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ a ma ọ bụghị www.millionmakers.com.
Nkwupụta nke iwu
Anyị nwekwara ike igosipụta ozi nkeonwe gị:
Dịka iwu siri dị, dị ka isonye na mpempe akwụkwọ, ma ọ bụ usoro iwu yiri ya.
Mgbe anyị kwenyere, site na ezigbo okwukwe, mkpughe ahụ dị mkpa iji kpuchido ikike anyị, kpuchido nchekwa gị ma ọ bụ nchekwa nke ndị ọzọ, nyochaa aghụghọ ma ọ bụ zaghachi arịrịọ gọọmentị.
Ọ bụrụ na anyị na-etinye aka na njikọ, nnweta, ma ọ bụ ire nke ihe niile ma ọ bụ otu akụkụ nke akụ anyị (nke a ga-eme ka ị mata gị site na ozi email na / ma ọ bụ ọkwa mara ama na weebụsaịtị anyị maka mgbanwe ọ bụla nke inwe ma ọ bụ ojiji nke ozi onwe gị , kwa, nhọrọ ọ bụla ị nwere ike gbasara ozi gbasara gị).
Nye ndị ọzọ ndị ọzọ, site na nkwenye tupu ị nweta ya.
Anyị kpebisiri ike ịnye ọkwa nchebe na nzuzo kachasị elu. A na-eme ihe niile dị n'ịntanetị, gụnyere ịhazi ụgwọ kaadị kredit, iji teknụzụ kwadoro, nke ihe nchọgharị gị kwadoro, nke na-ezochiri ozi niile ezigara anyị. Anyị na-akpachapụ anya iji kpuchido ozi nkeonwe gị pụọ na mwepu, ntọhapụ, nnweta na-enwetaghị ikike, iji ya mee ihe, ịgbanwe ma ọ bụ mbibi ma debe ozi nkeonwe naanị maka ebumnuche ị nyere ya maka anyị.
Nkwupụta GDPR (General Data Protection Regulation)
Iji kpuchido ozi nkeonwe gị bara uru, data niile echekwara na ọdụ data anyị, ma ọ bụ nke dị n'ịntanetị ma ọ bụ na-anọghị n'ịntanetị, ga-echedoro dịka GDPR nke EU (Njikọ Iwu Nchedo Data General na European Union law), nke na-abawanye na May 25th 2018.
MM LLC anaghị anakọta ma hazie data belụsọ mgbe enyere gị aka. Anyị na-ekwe nkwa ịgbasochi nchedo mba ụwa na ụkpụrụ nchedo nzuzo.
Anyị na-ezitere gị ozi kachasị mkpa na Ọrụ Immigrashọn, Ọrụ Mmụta, Ọrụ ụlọ ọrụ, ationtụ andtụ Isi na Nyocha, Ohere azụmahịa, nke ndị otu ọkachamara raara onwe anyị họpụtara, ndị bụ ndị ji ihe nzuzo dị mkpa kpọrọ ihe.
4. Nsuso teknụzụ / kuki
Kuki bụ obere faịlụ ederede echekwara na kọmputa onye ọrụ maka ebumnuche idebe ndekọ. Anyị na-eji kuki na saịtị anyị. Anyị anaghị ejikọta ozi anyị na-echekwa na kuki na ozi ọ bụla nwere ike ịmata nke ị nyefere n'okpuru saịtị a.
Anyị na-eji kuki NJ oge na kuki na-adịgide adịgide iji soro omume onye ọrụ yana iji chekwaa ozi ị tinyere n'ụdị anyị. Kuki ID nke oge ga-agwụ mgbe ị mechiri ihe nchọgharị gị. Kuki na-adịgide adịgide na-anọgide na draịvụ ike gị ruo ogologo oge. Nwere ike wepu kuki na-esote site na isoro ntuziaka enyere na ndekọ ihe nchọgharị “enyemaka” nke ihe nchọgharị gị. Ọ bụrụ na ị jụ kuki, ị ka nwere ike iji saịtị a, mana ike gị iji akụkụ ụfọdụ nke saịtị anyị ga-ejedebe.
Omume ịchụ nta / nwaghari
Anyị na netwọọdụ mgbasa ozi ndị ọzọ gosipụta mgbasa ozi na saịtị anyị ma ọ bụ jikwaa mgbasa ozi anyị na saịtị ndị ọzọ. Onye otu anyị na - ejikọ mgbasa ozi na - eji kuki na mgbama weebụ iji nakọta ozi na - enweghị njirimara gị gbasara ọrụ gị na webụsaịtị anyị yana weebụsaịtị ndị ọzọ, iji nye gị mgbasa ozi ezubere iche dabere na gị.
Mgbama weebụ / gifs
Anyị na-eji teknụzụ ngwanrọ akpọrọ gifs doro anya (aka mgbama weebụ) iji nyere anyị aka ijikwa ọdịnaya dị na weebụsaịtị anyị site na ịgwa anyị ọdịnaya dị irè. Onyinye doro anya bụ obere eserese nwere njirimara pụrụ iche, nke yiri ọrụ na kuki ma ejiri ya soro mmegharị ntanetị nke ndị ọrụ weebụ. N’adịghị ka kuki, nke echekwara na draịvụ kọmputa onye ọrụ, gifs doro anya na-agbakwunyere na adịghị ahụ anya na ibe weebụ ma ha dị ka nha nke nkwụsị zuru ezu na njedebe nke ahịrịokwu a. Anyị anaghị ekekọta ozi anakọtara site na gifs doro anya na ozi njirimara nke onwe onye ahịa anyị.
Nchịkọta / faịlụ ndekọ
Anyị na-anakọta ụfọdụ ozi na akpaghị aka ma chekwaa ya na faịlụ ndekọ. Ozi a gụnyere adreesị intaneti ịntanetị gị (IP), ụdị ihe nchọgharị, onye na-ahụ maka ịntanetị (ISP), na-ezo aka / peeji ọpụpụ, sistemụ arụmọrụ, akara ụbọchị / oge, yana data clickstream.
Anyị na-eji ozi a, nke na-anaghị amata ndị ọrụ n'otu n'otu, iji nyochaa ọnọdụ, na-achịkwa saịtị ahụ, na-eso mmegharị nke onye ọrụ gburugburu saịtị anyị ma kpokọta ozi igwe mmadụ banyere ntọala onye ọrụ anyị niile. Anyị anaghị ejikọ data a na-akpaghị aka na ozi amata.
Ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ nka na ụzụ, ma ọ bụ akụ nke ọzọ na saịtị anyị (dịka ndị metụtara nsuso nke ọma nke mgbasa ozi) anaghị ekpuchi iwu nzuzo a. Ndị ọzọ a nwere ike iji kuki, ihe onyinye doro anya, ihe osise na ederede iji nyere ha aka ijikwa ọdịnaya ha na saịtị a. Anyị enweghị ohere ma ọ bụ jikwaa teknụzụ ndị a. Anyị anaghị ekekọta ozi ndị ọzọ kpọkọtara gbasara ndị ahịa anyị ma ọ bụ ozi njirimara nkeonwe.
Nchedo nke ozi onwe gị dị ezigbo mkpa nye anyị. Mgbe i tinye ozi di omimi (dika kaadi kredit, ego ulo aka ma obu ebe ahia na ihe ndi ozo) di n’elu akwukwo anyi, anyi na eji uzo teknụzụ nchekwa (SSL) dobe nnyefe ozi a.
Anyị na-agbaso ụkpụrụ a nakweere n'ozuzu iji kpuchido ozi nkeonwe nyefere anyị, ma n'oge nnyefe ma ozugbo anyị nwetara ya. Agbanyeghị, enweghị usoro nnyefe na ntanetị ma ọ bụ usoro nchekwa elektrọnik, echedoro 100%. Yabụ, anyị enweghị ekwe nkwa na ọ bụ nchekwa zuru oke. Ọ bụrụ na ịnwere ajụjụ ọ bụla gbasara nchekwa na saịtị anyị, ịnwere ike ịkpọtụrụ anyị na info@millionmakers.com
6. Ozi ndị ọzọ
Njikọ saịtị ndị ọzọ
Saịtị a gụnyere njikọ nke weebụsaịtị ndị ọzọ nke omume nzuzo ha nwere ike ịdị iche na nke anyị. Mgbe ị nyefere ozi nkeonwe saịtị ndị ahụ, amụma nzuzo ha na-achịkwa ozi gị. Anyị na-akwado gị ka ị jiri nlezianya gụọ iwu nzuzo nke weebụsaịtị ọ bụla ị gara.
Wijetị na-elekọta mmadụ
Weebụsaịtị anyị gụnyere atụmatụ mmekọrịta-soshal midia (dịka ọmụmaatụ, facebook, twitter, wdg dịka e kwuru na weebụsaịtị anyị yana wijetị dị ka bọtịnụ "Ekekọrịta A") ma ọ bụ mmemme mmemme mmekọrịta. Ihe ndị a nwere ike ịnakọta adreesị IP gị na ibe nke ị na-eleta na saịtị a, ma nwee ike ịtọ kuki iji mee ka atụmatụ ahụ rụọ ọrụ nke ọma. Ejiri ndị ọzọ na-elekọta mmadụ na mgbasa ozi na wijetị ma ọ bụ na-akwado ya na weebụsaịtị anyị. Mmekọrịta nzuzo gị na njirimara ndị a na-achịkwa iwu nzuzo nke ụlọ ọrụ na-enye ha.
Anyị nwere ike igosipụta akaebe nke ndị ahịa nwere afọ ojuju, na mgbakwunye na nkwenye ndị ọzọ, na saịtị anyị. A na-adọta akaebe ndị a site na ndị na-eweta ọrụ ndị ọzọ, nke nwere ike ịrịọ maka ozi gbasara gị, gụnyere aha gị na adreesị ozi-e. Agbanyeghị na anyị anaghị edebanye ozi nke aka gị na saịtị a, ọ bụrụ na ịchọrọ imelite ma ọ bụ hichapụ ihe akaebe gị, biko kpọtụrụ onye njikwa data.
Mgbanwe na iwu a
Anyị nwere ike imelite iwu nzuzo a iji gosipụta mgbanwe na omume ozi anyị. Ọ bụrụ na anyị agbanwee ihe ọ bụla, anyị ga-agwa gị ọkwa site na ọkwa na saịtị a tupu mgbanwe ahụ daa arụmọrụ. Anyị na-akwado gị ka ị nyochaa peeji a kwa oge maka ozi ndị kachasị ọhụrụ gbasara omume nzuzo anyị.
Dịka ndị mmekọ mba ụwa, anyị na-enyere ndị ahịa anyị aka ito ngwa ngwa
ọtụtụ ihe ga - akwụ ụgwọ nke ọma site n'ịgbanye gị n'okike.